October 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha October 31, 2020
(Spain) 01 Nof 2020. Kooxaha Deportivo Alaves iyo Barcelona ayaa barbaro 1-1 ah ku kala baxay, kulan ka tirsanaa horyaalka La Liga ee dalka Spain. Qeybt hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda Deportivo Alaves. Daqiiqadii 31-aad kooxda Deportivo Alaves ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-0 ka dhigay Luis Rioja. […]Sii akhriso
Liverpool oo garoonkeeda Anfield guul kaga gaartay kooxda West Ham… +SAWIRRO
(Liverpool) 31 Okt 2020. Liverpool ayaa guul soo laabasho ah kaga gaartay kooxda West Ham garoonkeeda Anfield, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-1, kulan qeyb ka ahaa horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbardhac 1-1 ah ay isku dhaafi waayeen labada kooxood Liverpool iyo West Ham United. Daqiiqada 10-aad kooxda West […]Sii akhriso
(Spain) 31 Okt 2020. Kooxda Deportivo Alaves ayaa garoonkeeda Estadio Mendizorroza ku soo dhaweyn doonto naadiga Barcelona si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka La Liga. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Deportivo Alaves iyo Barcelona ee horyaalka La Liga dalka Spain. SAFAFKA RASMIGA EE LABADA KOOXOOD […]Sii akhriso
(Burnley) 31 Okt 2020. Chelsea ayaa guul raaxo leh ka soo gaartay kooxda Burnley oo ay ku booqatay garoonkeeda Turf Moor, kulan ku dhamaaday 0-3, kaasoo qeyb ka ahaa horyaalka Ingiriiska. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-1 ay ku hoggaamineysay kooxda Chelsea. Daqiiqadii 27-aad Chelsea ayaa hoggaanka u qabatay dheesha waxaana 0-1 ka […]Sii akhriso
(Liverpool) 31 Okt 2020. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Liverpool iyo West Ham United ee horyaalka Premier League ayaa la shaaciyey. Kooxda Liverpool ayaa soo dhaweyn doonta naadiga West Ham United si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Liverpool […]Sii akhriso
Soomaaliya October 31, 2020
MUQDISHU-(SONNA)-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo kormeeray Wasaaradda Maaliyadda, Bangiga Dhexe ee dalka iyo Dekedda magaalada Muqdisho ayaa tilmaamay in Xukuumaddu ay sii dardar gelinayso qorsheyaasha ka dhanka ah musuqmaasuqa iyo ku tagri-falka hantida iyo awoodda dowladnimo. Ra’iisul Wasaaraha ayaa kulammo Sii akhriso
Wasiirka Waxbarashada oo kulan la qaatay Agaasimeyaasha iyo Howlwadeennada Wasaaradda “SAWIRRO”
MUQDISHU-(SONNA)-Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare Eng. Cabdullahi Abuukar Xaaji iyo Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Waxbarashada Marwo Nuuriye Adam Ciise ayaa maanta kulan is barasho ah la yeeshay Agaasimayaasha Wasaaradda Waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta Sare. Kulanka oo uu goob joog ka ahaa Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Sii akhriso
(Madrid) 31 Okt 2020. Real Madrid ayaa guul ay u qalantay ka gaartay kooxda SD Huesca, kaddib markii ay kaga adkaatay 4-1, kulan qeyb ka ahaa horyaalka La Liga ee dalka Spain. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Real Madrid Daqiiqadii 40-aad kooxda Real Madrid […]Sii akhriso
Xildhibaannada Golaha Shacabka oo ansixiyay sharciga Hanti dhowrka Guud ee Qaranka
MUQDISHU-(SONNA)-Kulanka Mudanayaasha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo uu shir Guddoominayay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, waxaa ugu horeyn Habdhowraha Golaha Shacabka Xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Xasan ‘’Nuux’’ uu dhaariyay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada iyo Sii akhriso
Council for Ethiopian Diaspora Action, CEDA: PM Abiy Ahmed Response to Donald Trump on Bombing the DAM / GERD – PRNewswire
Ethiopia News October 31, 2020
Council for Ethiopian Diaspora Action, CEDA: PM Abiy Ahmed Response to Donald Trump on Bombing the DAM / GERD PRNewswireSii akhriso